Ahoana no hizarana karazana rakitra amin'ny terminal Android | Androidsis
Androany, amin'ity fampianarana video azo ampiharina vaovao ity dia tiako haseho anao ny fomba tsara indrindra mizara karazana rakitra miaraka amin'ny terminal Android, na mifandray amin'ny tambajotra iray ihany na tsia.
Hataontsika amin'ny fomba haingana sy haingana tokoa izany rehetra izany amin'ny alàlan'ny fampidinana ny fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android, azo alaina ao amin'ny Google Play Store amin'ny anaran'ny Alefaso any aiza na inona no tonga mitovy dika amin'ny fiteny Cervantes, Alefaso amin'ny toerana rehetra.
1 Inona no atolotry ny Send Anywhere?
2 Ahoana ny fomba hizarana karazana rakitra amin'ny terminal Android. (Fampisehoana an-tsary ny fampiasana ny Send Anywhere).
3 Sintomy ny mandefa na aiza na aiza maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Inona no atolotry ny Send Anywhere?
Ny fomba nahitanao an'ity horonan-tsary niraikitra ity eo an-tampon'ity lahatsoratra ity, horonantsary noforoniko manokana izay anomezako anao fampisehoana azo ampiharina momba izay rehetra azontsika atao amin'ny alàlan'ity fampiharana manaitra ho an'ny Android ity; Ny fizarana karazana rakitra amin'ny terminal Android dia tsotra toy ny fisafidianana izay tiana halefa amin'ny fipihana ny bokotra mandefa, na sary, horonan-tsary, antontan-taratasy, fampiharana, fisie compresses na izay tiana halefa, ary vantany vao vita tsindrio ny bokotra manaraka eo amin'ny farany ambany ankavanan'ny ny fampiharana ka ity tatitra aminay ny isa enina-isa fa tsy maintsy hiditra amin'ny terminal izay te-handray ny fisie isika.
Ny tsara indrindra amin'ity fampiharana ity, ankoatr'izay tsy mila karazana fisoratana anarana na zavatra toy izany, afaka manao izany isika mandefa ary mandray rakitra amin'ny hafainganam-pandeha toy ny hoe tamin'ny alàlan'ny Wifi, na ny fandefasana ireo rakitra any amin'ireo terminal any ivelan'ny tamba-jotra aza.
Ny hany zavatra ilainao hananana ny fisie anay, ankoatry ny fametrahana ny fampiharana ao amin'ny terminal Android anao sy ny fahafantarana ilay isa enina enina voalaza etsy ambony nateraka tao amin'ilay terminal izay andefasanao anay ilay rakitra, dia ny mila mifandray amin'ny Internet ny lojika na amin'ny alàlan'ny fifandraisana data na fifandraisana amin'ny alàlan'ny Wifi.
Ny tsara indrindra, ankoatry ny tsy misy fetra momba ny habe na ny karazana rakitra, dia ny tsy fisian'ny fisie hijanona ao anaty rahona satria rehefa nahazo ny fisie dia ho voafafa amin'ireo mpizara fampiharana aorian'ny fe-potoana voatondro izay heveriko fa tadidiko dia 10 minitra raha tsy nampiasaina ilay kaody na aorian'ny 24 ora raha nampiasainay ny kaody famindrana rakitra.
Ahoana ny fizarana karazana rakitra amin'ny terminal Android. (Fampisehoana an-tsary ny fampiasana ny Send Anywhere).
Sintomy ny mandefa na aiza na aiza maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Alefaso na aiza na aiza (Famindrana rakitra)
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ny fomba tsara indrindra hizarana karazana rakitra amin'ny terminal Android, na mifandray amin'ny tamba-jotra mitovy izy na tsia
HTC Grip dia tsy ho tonga raha tsy amin'ny 2016